Aiza ny faritra tsara tarehy indrindra amin'ny Danube Cycle Path? > Amin'ny bisikileta
↓ Mandehana mankany amin'ny atiny fototra
Ankehitriny Danube Cycle Path
Famintinana ireo dingana
Dingana 5 Melk - Krems
Inona no atao hoe Wachau?
Lohataona eo amin'ny lalan'ny tsingerin'ny Danube ao amin'ny Wachau
Vonin'ny apricot ao amin'ny Wachau
Faharavan'ny trano aoriana
Inona no atao hoe Danube Cycle Path?
Ny Danube no renirano faharoa lava indrindra any Eoropa. Miakatra any Alemaina izy io ary mikoriana any amin'ny Ranomasina Mainty.
Misy lalan'ny tsingerina manaraka ny Danube, ny lalan'ny tsingerina Danube.
Rehefa miresaka momba ny lalan'ny tsingerin'ny Danube isika, dia matetika ny lalana be mpandeha indrindra avy any Passau mankany Vienne no tiana holazaina. Ny faritra tsara tarehy indrindra amin'ity lalan'ny tsingerina manaraka ny Danube ity dia ao amin'ny Wachau. Ny fizarana avy any Spitz ka hatrany Weissenkirchen dia fantatra amin'ny anarana hoe fon'ny Wachau.
Ny fitsangatsanganana avy any Passau mankany Vienne dia matetika mizara ho dingana 7, eo ho eo amin'ny 50 km isan'andro.
Ny hakanton'ny Danube Cycle Path
Mahafinaritra ny mandeha bisikileta midina amin'ny Danube Cycle Path.
Tena mahafinaritra ny mandehandeha mivantana amin'ny renirano malalaka, ohatra ao amin'ny Wachau eo amoron'ny Danube atsimo avy any Aggsbach-Dorf mankany Bacharnsdorf, na amin'ny Au avy any Schönbühel mankany Aggsbach-Dorf.
ao anatin'ny 7 andro Passau Vienna
Teny an-dalana amin'ny Danube Cycle Path
Inona no atao hoe Heuriger?
Fiara bisikileta azo antoka (miaina mampidi-doza ny mpitaingina bisikileta)